Thijs: Martin Vrijland
Sarotra ny mitazona ny asa ara-psikolojika maro (PsyOps) izay efa manidina amin'izao fotoana izao. Efa nanambara aho fa ny zavatra toy ny an'i Anne Faber dia tokony hitarika amin'ny fampidirana ny 'fikarohana fitadiavana'. Androany dia hitantsika ny fampidirana io fampihatra nataon'ireo haino aman-jery io; toerana izay [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 May 2019	• 9 Comments
Mbola tsy vonona ny vahoaka. Ny fanangonan-tsonia iray avy amin'ity tranonkala ity dia nahazo sonia maherin'ny dimy arivo hanohitra ny volavolan-dalan'i Edith Schippers teo ambany fitondran'ny kabinetra Rutte teo aloha. Raha fintinina, dia midika be izany vola izany fa ny namanao, ny mpifanolo-bodirindrina aminao na ny fianakavianao dia tokony hiantso ny maha-tsirambina anao mba hahazoana antoka fa [...]
Total visits: 13.068.333
Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
Fihetsiketsehana ho an'ny tantsaha: mandinika fa tsy mpiasam-panjakana ny mpitondra ataonao
Ruinerwold Drenthe sy ny fianakaviany, ny asa ara-tsaina manaraka (PsyOp) ho an'ny fanjakana bebe kokoa
Camera 2 op Nahoana ny transgender no lasa fitsipika vaovao ho an'ny taonjato 21 ary manjavona ny heterosexual
guppy op Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
ZalmInBlik op Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
Martin Vrijland op Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy'
Mifandraisa anjara amin'ny 1.649 hafa